Rest of Myanmar | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း မှ | MyJobs
Rest of Myanmar ရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း မှ
Sales Supervisor (Pyay) - Male 1 Post
Warehouse Assistant Manager Male (အရှေ့ဒဂုံတွင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရန်)
Any Graduate,Degree or Certification in logistics, supply chain management - At least3years factory warehouse management experience
Any Graduate,Degree or Certification in logistics, supply chain management - A ...
Warehouse Manager Male (အရှေ့ဒဂုံတွင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရန်)
Any Graduate,Degree or Certification in logistics, supply chain management - At least3years warehouse management experience
Any Graduate,Degree or Certification in logistics, supply chain management - At leas ...
စေ်းကြက္ အေျခအေန ၊ေငြ ေၾကး ထိမ္းသိမ္းျခင္းမ်ား ၊၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းမ်ား ၊ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၾကည့္ရႈရန္။
စေ်းကြက္ အေျခအေန ၊ေငြ ေၾကး ထိမ္းသိမ္းျခင္းမ်ား ၊၀န္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းမ်ား ၊ေစ်းကြက္လိုအပ ...
Maintenance Technician (ပဲခူးတွင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရန်)
At least3year experience in related field. - Able to communication in English - BE ( Mechanical )/Diploma or Certificate in M&E
At least3year experience in related field. - Able to communication in English - BE ( Me ...
တောင်ကြီးတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။ နယ်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။
တောင်ကြီးတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။ နယ်ခရီးသွားလာနိုင ...
Factory Supervisor – Sagaing (Male) -1 Post
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။